“ऑस्ट्रिलियाबाट फे’री लि’क भ’यो ए’क ने’पा’ली जो’डी’को आ’प’त्तिज’नक भि’डि’यो (भि’डि’यो हेर्नुहोस)” – Krazy NepaL
“ऑस्ट्रिलियाबाट फे’री लि’क भ’यो ए’क ने’पा’ली जो’डी’को आ’प’त्तिज’नक भि’डि’यो (भि’डि’यो हेर्नुहोस)”
November 23, 2020 1761
सबै मानिसहरु सुन्दर हुँदैनन् । व्यक्तिहरु अलग–अलग रुप रंगका कारण चर्चित हुने गर्छन् । सुन्दरतालाइै लिएर केहि प्रतिस्पर्धा र अवार्ड शो हरु पनि हुने गरेका छन् । कोही यस्ता पनि हुन्छन् जसलाई विश्वकै सुन्दर मानिन्छन् । सुन्दर हुनलाई मोडलको जिरो फिगर हुनु पर्छ भन्ने पनि छैन् । कोही अजीबको शरीर भएमा त्यसैपनि चर्चामा रहन्छन्प्रा य विश्वभर मोडलहरु कुनै कारणले चर्चित हुन्छन् । आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौ मोडल अलेग्रा कोलको । ४७ वर्षकी यी मोडलले पहिला पियानो शिक्षक थिइन् । तर अहिले भने आफ्नो शरीरको कारणले लाखौ रुपैयाँ कमाइरहेकी छिन् । अलेग्राको अनुसार उनी आफैले जेसिका रैबिट जस्तो परेफेक्ट देखिन चाहान्थिन् । त्यसकारण पहिलो पटक सर्जरी गराउने निर्णय लिइन् र अझैपनि यसरी नै सर्जरी गराउने छिन् ।
कुनैबेला भनिन्थ्यो, मो’टोघाटो हुनुपर्छ । खा’इलाग्दो हुनुपर्छ । अहिले जमाना स्लिमको छ । ग्या’जेट्स मात्र होइन, ज्या’न पनि स्लिम नै खोजिन्छ । किन त ? किनभने अहिले मो’टोपनले ‘खा’नदानी’को होइन, रो’गको संकेत गर्छ । मो’टोपनको अहिले थुपै्र सा’इड इ’फेक्ट देखिएको छ । प’हिलो, यसले ज्या’नलाई भ’द्दा देखाउँछ । ज्यान फु’र्तिलो, छ’रितो र चु’स्त हुँदैन । दोस्रो, अहिलेको ज’मानामा व्य’क्तित्वको खास महत्व छ । यस्तो अवस्थामा भ’द्दा श’रीर आफैमा व्य’क्तित्वको बा’धक हो । यस्तो श’रीरमा न लुगा सुहा’उँछ ? न समग्र श’रीरको बा’न्की मिल्छ । तेस्रो, मो’टो श’रीर हुनु भनेको श’रीरमा अ’तिरिक्त बो’सोको भ’ण्डार हुनु हो । यसले र’क्तनलीहरुलाई थप साँ’घुरो बनाउँछ । मु’टु, क’लेजो, मृ’गौलाको कार्य-संचालनमा अवरोध पुर्‍याउँछ । यसले अनेक किसिमको रो’ग निम्त्याउँछ । जस्तो कि, उ’च्च र’क्तचाप, म’धुमेह, को’लोस्टोर आदि । मो’टोपन हुनुको सबैभन्दा ठूलो बे’फाइदा भनेकै संभावित रो’गको भ’य हो । मो’टोपनले रो’गलाई जन्म दिन्छ । अहिले अ’धिकांशलाई यसको हेक्का छ । त्यसैले ज्या’न बढाउने होइन, घ’टाउने चक्करमा लागेको देखिन्छ । अर्थात श’रीरलाई चु’स्त र छ’रितो बनाउने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । तर, यसका लागि समु’चित तरिका के हो त ? कतिलाई थाहा नहुन सक्छ । किनभने मो’टोपन घ’टाउने चक्करमा रहेकाहरुले आफ्नो खानामा क’टौती गरिरहेका हुन्छन् ।
*****************यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला********************
Prev“पुरुष’मा स’धै यस्तो गुण’हरु चा’हन्छन् हरे’क महिला’हरु जा’नी राक्नु’होस “
Next“नेक’पा पार्टी फुटे’को घोषणा भयो लिखिद प्रतिबदेन आउदै सबैलाइ तयार रहन आग्रह : प्रचण्ड “